रक्षामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालद्वारा राजीनामा घोषणा - Nepal’s First News Agency
रक्षामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालद्वारा राजीनामा घोषणा
काठमाडौं, पुष १ गते । रक्षामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा घोषणा गर्नुभएको छ । रिजालले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिने कुराको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले महामन्त्री पदको अन्तिम परिणाम घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाउने जानकारी दिनुभयो । महामन्त्रीका ६ जना प्रतिस्पर्धीमध्ये डा. रिजाल पाँचौ स्थानमा हुनुहुन्छ । उहाँ डा. शेखर कोइरालाको समूहबाट महामन्त्री उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा डा. रिजालले असोज २२ गते रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो ।